Iindaba -I-2021 iHonda CRF300L kunye neCRF300L yaseMelika iRally ibhengeziwe
Njengoko uDennis Chung, indoda yakwaHonda eToronto, waqikelela xa iHonda Yurophu yabhengeza iindaba ekuqaleni kukaDisemba, imoto encinci neziphuculiweyo yabantu abancinci eza kungena kwimakethi yaseMelika. Ngapha koko, u-Honda wathi i-CRF yeyona nto ithengiswa kakhulu kwezemidlalo kwimveliso yezithuthuthu.
Nge-CRF300L kunye neCRF300L Rally entsha, umsebenzi kukonyusa amandla, ukunciphisa ubunzima kunye nokuphucula ukusebenza kwendlela? "Ngaphandle kokuncama ixabiso, ukuthembeka kunye nesimbo sokubonakala, la maxabiso, ixabiso kunye nokuthembeka kudlale indima ebalulekileyo ekuthandweni komatshini." Nangona siqonda ukuba oomatshini bobabini baphantse bayalingana ngokusebenza, ngaphandle komthamo wepetroli, Ukongeza umahluko phakathi kwesigcini esisezantsi kunye nefestile eyakhelweyo yemoto ye-rally, sikwabandakanya ukukhutshwa okupheleleyo kukapapasho luka-Honda kwezi modeli zimbini zingezantsi.
Amandla ongezelelweyo kunye ne-torque zifunyenwe ngokwandisa ukufuduswa nge-15% -kusuka kwi-250 ukuya kwi-286 cc ngelixa ikwanyusa nokusebenza kwendlela ngokwandisa ukubekwa okuxhonyiweyo kunye nokucoca umhlaba. Kwangelo xesha, u-Honda uthe ubunzima besithuthi esipheleleyo buthe bancitshiswa nge-11 yeepawundi, ethe yafezekiswa ngokusetyenziswa kohlalutyo lobunjineli oluncediswa yikhompyuter yokwandisa ubukhulu beplate kunye nobungakanani beetyhubhu kwizinto ezininzi. Iingcebiso zesitayile zivela kuthotho lwe-Honda's CRF Performance, ngelixa i-MSRP "isakhuphisana kakhulu."
Ngomzimba wayo kunye nemizobo ebomvu, emhlophe, emnyama nomnyama, iCRF300L ijolise ekulingiseni ukubonakala kweCRF Performance uthotho, kubandakanya neBaja-based CRF450X.
Indawo yokukhwela Indawo yokukhwela itshintshiwe ukuphucula ukufakwa kwabagibeli kunye nokuhamba kwezithuthi. I-angle yokutshayela yesiphatho inyuswe ukwenza indawo yengqiniba ibe yendalo ngakumbi, ukuqondisa kulula, kwaye ubunzima besiphatho buyonyuswa ukunciphisa ukungcangcazela. Ububanzi beendawo zangasemva neziphakathi esihlalweni zihlala zinjalo ukugcina intuthuzelo, ngelixa indawo engaphambili inciphile ukuphucula igalelo lomkhweli ngamathanga namadolo. Iipiks zeenyawo nazo zihanjiswe ngasemva, ngaloo ndlela zenza lula ukusebenza kweenyawo zelever yokutshintsha kunye nephuli yokuqhekeza, kunye nesembozo esisekunene se-rocker arm pivot senziwe ngokutsha ukunciphisa ububanzi. Kukwabonelelwa nangezikhonkwane zothutho lwabakhweli.
Imitha Imitha entsha inabalinganiswa abamnyama kwimvelaphi emhlophe, kwaye abalinganiswa bano-6 mm bakhulu ukuphucula ukubonakala. Ukongeza kwisantya, iwotshi kunye nokufundwa kwe-rpm, kuye kongezwa amanqaku amatsha, kubandakanya izikhundla zegiya, ipetroli kunye nepetroli. Imitha iyancitshiswa ngama-0.01 eepawundi.
Inkqubo ye-injini / yokuhambisa iqale ukusuka kwi-CRF250L, i-Honda iguqule i-liquid-cooled single-cylinder single-stroke power plant, yonyusa ukubetha nge-8 mm (iyonke i-63.0 mm), ngelixa igcina ubukhulu be-cylinder eyi-76.0 mm ingatshintshanga. Oku kukhokelele ekunyukeni okungu-36cc kokufuduswa kwabantu, kangange-286cc iyonke, ethe yabangela ukuba igama litshintshe libe yiCRF300L. Ukubetha okungaphezulu kwepiston kwandisa amandla kunye ne-torque kulo lonke uluhlu lwesantya.
Ukongeza, i-camshaft ikwahlengahlengisile ukuphakanyiswa kunye nexesha lokunyusa imveliso kwinqanaba elisezantsi lesantya, esihlala sisetyenziselwa ukukhwela esixekweni nasekuqhubeni ezindleleni.
Uyilo lwesixhobo sokungenisa / sokucoca ulwelo luye lwahlengahlengiswa ukugcina i-38 mm enkulu yomzimba wokugoba kunye nokufaka inkqubo entsha yokukhupha kunye nentloko elula kunye nokuncipha-nangona ukuncitshiswa kwemveliso yesandi kufezekiswa ngolawulo olungcono lokungcangcazela. Ngokudibeneyo, olu tshintsho lunokuphucula ulawulo lwe-throttle, ngakumbi kwii-revs ezisezantsi.
Njengangaphambili, indlela yevalve yenjini yamkela uyilo lwerocket rock ukufezekisa intloko yesilinda eyomeleleyo, ngelixa i-balancer inokufikelela ekusebenzeni ngokugudileyo.
Umyinge ophakathi kweegiya ezinesantya esincinci umncinci, kwaye umgama kwiijubane ezikhulu ukhulu, ukuze olona khetho lubalaseleyo lwenziwe ngelixa ufezekisa ukonwaba. isantya esiphezulu. ukuhamba ngenqanawa. Oku kubetha ukulingana phakathi kokusebenza kwedolophu. , Umgama omde kunye nokusetyenziswa kwendlela.
Iklatshi idunyisiwe ngenxa yokutsala kwayo okuncinci. Imodeli iya kuba nokutsala okukhaphukhaphu (malunga ne-20%) ngo-2021, enkosi kwi-clutch encedisayo / eslip esitsha, ekwabonelela ngokusebenza okungcono xa kusenziwa iinguqu ezisebenzayo.
I-chassis / ukunqunyanyiswa Nangona injini inamandla ngakumbi, ubume bezinto ezininzi bohlukile, nto leyo inciphisa ubunzima besithuthi. Umzekelo, isigaxa esiphindwe kathathu ngoku senziwe ngealuminium endaweni yesinyithi, kwaye ubunzima bucuthwa nge-0.1 lb.Oku akubangeli kumandla okuqhuba ancitshisiweyo kuphela, kodwa ngenxa yokwehla kobunzima kwenzeka phezulu kakhulu kwisithuthi, embindini Umxhuzulane usezantsi.
Ngokwandisa izinto eziphambili zesakhelo, ubunzima besakhelo buncitshiswa nge-0.3 yeepawundi, ngelixa ukuqina komva kuncitshisiwe ngama-25%, ngaloo ndlela kuphuculwa ukushukuma kunye nokuziva okuhleliyo: ityhubhu esezantsi iyancitshiswa nge-30 mm; ityhubhu ezantsi gusset Encinci; umbhobho ophambili yi-20 mm mfutshane; ububanzi betyhubhu ye-stent bancitshiswa nge-3.2 mm ukuya kwi-25.4 mm.
Ukongeza, uhlaziyo kwisakhelo nakwiyilo yecrankcase yonyuse ukucoca komhlaba nge-intshi ye-1.2, ngalo ndlela kuncitshiswa ithuba lokuphazamiseka xa uqhuba kwimeko zendlela ezingekho mgangathweni.
Isibiyeli somelele kwaye sinokumelana nokugoba, kwaye indawo yonyawo ngoku ikwi-10% enkulu ukuphucula ukuzinza kwezithuthi xa kupakwa.
Ingalo yerock yangasemva iyafana nesakhelo, kwaye ukuqina kunye nokuqina kwentsimbi yengalo yangasemva kwehle nge-23% kunye ne-17% ngokwahlukeneyo. Ububanzi kufutshane nepivot buncitshisiwe nge-15 mm, kwaye icandelo eliwela lonke ibandla liye lahlengahlengiswa ukubonelela ngokuhambisa ngakumbi ukugqwetha, okukhokelela kukuziva ngcono kunye nokuphathwa okunokuqikelelwa ngakumbi. Ubunzima bengalo yerocker nabo buncitshisiwe ngama-0.08 eepawundi-ukunciphisa ubunzima bentwasahlobo, ngaloo ndlela kuphuculwa isenzo sokumiswa.
Ukurhoxiswa Njengoko bekutshiwo ngaphambili, ukunqunyanyiswa kubandakanya i-43mm Showa ifolokhwe eguqulweyo kunye nePro-Link yenkqubo enye yasemva yokothuka. Nangona kunjalo, ukubetha okuyekisiweyo kwandisiwe, kwaye ukuhamba kwevili langaphambili nangasemva zii-intshi eziyi-10.2, ukonyuka kwee-intshi ezi-0.4 kunye nee-intshi ezi-6 ngokwahlukeneyo. Useto luye lwaguqulwa kwaye kusetyenziswa amakhonkco amatsha angasemva kunye namakhonkco asetyenzisiweyo. Iziphumo ezidibeneyo kukuphuculwa kokumiswa komsebenzi, ngakumbi ngexesha lokuhamba ngaphandle kwendlela.
Iziqhoboshi zeHydraulic zisetyenziswa ngaphambi nasemva kokuqhekeka. Iirotors zine-256 kunye ne-220 mm rotors ngokwahlukeneyo, kunye ne-ABS ekhoyo, enokulawula kakuhle ukubopha iziqhoboshi kwiimeko ezahlukeneyo. Ngokufana noyilo olusetyenzisiweyo kuthotho lweCRF yeNtsebenzo, isilinda esitsha sangasemva esineziqhoboshi sixhotyiswe ngetanki lamafutha. Oku konga isidingo sokudibanisa itanki lamanzi ekude kumbhobho owenziwe ngaphambili, okukhokelela kwinkangeleko ecocekileyo. Ngokufanelekileyo, i-ABS inokucinywa ngasemva ukubonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokukhwela kwiimeko zendlela.
Amavili ayafana nokusebenza okuphezulu kwendlela. Ubungakanani bamavili zii-intshi ezingama-21 kumavili angaphambili kunye nee-intshi ezingama-18 amavili angasemva. Banokuqengqeleka kakuhle kwiindawo ezimbi. Xa kuthelekiswa nemodeli ye-2020, iirim zealuminiyam emnyama ziyakhazimla, zinobukhazikhazi, kwaye kulula ukuzicoca.
I-sprocket yangemva inciphile kwezinye iindawo kwaye ineebhanti ezincinci (M8 endaweni ye-M10), egcina iipawundi eziyi-0.04. I-asi engasemva ngoku iyimingxunya kwaye ichetyiwe phantse i-0.03 yeepawundi.
Izixhobo zeHonda zibonelela ngezinto ezininzi, kubandakanya oonogada bezandla, iipleyiti ezichasene neskid, iziseko zamandla, iipiks ezibanzi, iibhokisi eziphezulu, ii-racks, njl.
I-RF300L Rally yenzelwe ukuvusa umfanekiso kaRicky Brabec ophumelele iCRF450 Rally yeDakar Rally. Isekwe kumgangatho oqhelekileyo weCRF300L kodwa inomthamo omkhulu wamafutha, unogada wesandla kunye nefestile yomoya eyenziweyo, iyenza ilungele uhambo olude lomgama ngaphandle kweendleko zokungahambi kakuhle, iRally yeCRF300L inetanki lamafutha enkulu kwaye inobunzima obuziikhilogram ezili-9 kwitrafikhi yasezidolophini. kwaye nakwiindlela. Ngaphantsi kwemodeli yangaphambili, ukufuduswa kuye kwandiswa nge-15%, ngaloo ndlela kwandiswa amandla kunye ne-torque, okwenza kube lula ukuhamba kwexesha elide.
Ukumodareyitha ngo-2021, abaqulunqi bakwa-Honda bamkele i-rally ekhoyo ye-CRF250L ukuyenza ibenomdla ngakumbi, isandisa itanki ye-fuel ngama-25% (i-0.7 yeelitha iyonke ye-3.4 yeelitha, ezona zininzi kwiklasi yayo). Ukuthathela ingqalelo uqoqosho olugqwesileyo lwamafutha kule modeli, iCRF300L inoluhlu oluqwalaselweyo kuvavanyo lweemayile ezingama-250.
Njengomatshini oqinileyo kumzi-mveliso weMonster Energy Honda, ngasemva igcinwe incinci, nto leyo eyenza ukuba umkhweli ahambe ngokulula kwaye agxile kumgangatho ongaphambili wesithuthi. Imizobo ebomvu ebomvu, emhlophe, emnyama kunye neblue ilinganisa ukubonakala koluhlu lweNtsebenzo lweCRF.
Ukunciphisa ubunzima bezinto ezininzi, kubandakanywa i-fender yangaphambili (eyancitshiswa ngama-0.02 iipounds), iingubo zecala (ezincitshiswe ngama-0.05 iipounds), ibhokisi yezixhobo (eyancitshiswa ngama-0.03 iipounds) kunye ne-bracket yelayisenisi yephepha (iyancitshiswa ngama-0.04 iipounds).
Indawo yokukhwela ngaxeshanye, indawo yokukhwela itshintshiwe ukuphucula ukufakwa kwabagibeli kunye nokuhamba kwesithuthi. Ukwenza indawo yengqiniba ibe yendalo ngakumbi, ukuqondisa kukhaphukhaphu, amandla okuphatha ibhagi ayonyuswa, kwaye ubunzima beebamba ezimbini (5.8 ii-ounces nganye) ziyongezwa ukunciphisa ukungcangcazela, kwaye irabha yongezwa kwiinyawo zenyawo ngesizathu esinye seqonga . Isihlalo sisebenzisa iphedi entsha yerabha. Xa kuthelekiswa nemodeli esemgangathweni, ububanzi bayo bonyuswe nge-20 mm ukuya kwi-190 mm, nangona umphambili ugcinwe umxinwa ukuvumela iinyawo zomkhweli ukuba zinxibelelane nomhlaba xa kufuneka njalo. Izikhonkwane zothutho lwabakhweli zizixhobo ezisemgangathweni.
Iipiks zeenyawo nazo zihanjiswe ngasemva, ngaloo ndlela zenza lula ukusebenza kweenyawo zelever yokutshintsha kunye nephuli yokuqhekeza, kunye nesembozo esisekunene se-rocker arm pivot senziwe ngokutsha ukunciphisa ububanzi.
Imitha Imitha yedijithali entsha inabalinganiswa abamnyama kwimvelaphi emhlophe kwaye abalinganiswa bano-6 mm bakhulu ukuphucula ukubonakala. Ukongeza kwisantya, iwotshi kunye nokufundwa kwe-rpm, kuye kongezwa amanqaku amatsha, kubandakanya izikhundla zegiya, ipetroli kunye nokusetyenziswa kwepetroli. Imitha iyancitshiswa ngama-0.01 eepawundi.
Inkqubo ye-injini / yokuhambisa iqale kwirali yeCRF250L. I-Honda iguqule i-liquid-cooled single-cylinder single-stroke power plant, yandisa ukubetha nge-8 mm (iyonke i-63.0 mm), ngelixa ishiya i-bore ye-76.0 mm ingatshintshanga. Oku kubangele ukonyuka okungama-36cc kokufuduka, ukuya kuthi ga kwi-286cc, eyakhokelela kutshintsho lwegama kwiCRF300L Rally. Ukubetha okungaphezulu kwepiston kwandisa amandla kunye ne-torque kulo lonke uluhlu lwesantya.
Ngokwandisa izinto eziphambili zesakhelo, ukuqina kwesakhelo kuncitshisiwe ngama-25%, okuphucula ukuqhuba kunye nokuziva komkhweli, kwaye ubunzima besakhelo buncitshiswe nge-0.3 yeepawundi: ityhubhu ezantsi incitshiswe nge-30 mm; ityhubhu ezantsi IGusset incinci; umbhobho ophambili yi-20 mm mfutshane; ububanzi betyhubhu ye-stent bancitshiswa nge-3.2 mm ukuya kwi-25.4 mm.
Ingalo enye ye-aluminium ejikeleze ingalo ejikelezayo iphucula ukugoba okuphuculweyo, kwaye ukuqina kunye nokuqina kwethambo kuncitshisiwe ngama-23% kunye ne-17% ngokwahlukeneyo. Ububanzi kufutshane ne-axiv axis buncitshisiwe nge-15 mm, kwaye icandelo eliphambeneyo lecandelo lilungisiwe ukuze linikezele ngakumbi ukuhanjiswa kokugqwetha, okukhokelela kukuziva ngcono kunye nokuphathwa okunokuqikelelwa ngakumbi. Ubunzima bengalo yerocker nabo buncitshisiwe ngama-0.08 eepawundi-ukunciphisa ubunzima bentwasahlobo, ngaloo ndlela kuphuculwa isenzo sokumiswa.
Ukurhoxiswa Njengoko bekutshiwo ngaphambili, ukunqunyanyiswa kubandakanya i-43mm Showa ifolokhwe eguqulweyo kunye nePro-Link yenkqubo enye yasemva yokothuka. Imivumbo yeevili ngaphambili nangasemva zii-intshi eziyi-10.2 kunye nee-intshi ezingama-10.4 ngokwahlukeneyo.
I-sprocket yangemva inciphile kwezinye iindawo kwaye ineebhanti ezincinci (M8 endaweni ye-M10), egcina i-0.03 yeepawundi zobunzima. I-asi engasemva ngoku ingena mngxunya, ukunciphisa ukukrwela okongeziweyo nge-0.02 yeepawundi.
Izixhobo zeHonda zibonelela ngezinto ezininzi, kubandakanya iziseko zamandla, iipikisi ezibanzi, izibambo ezishushu, iibhokisi eziphezulu, iiracks, njl.
Yiba ngaphakathi kwiMotorcycle.com. Kuqala bhalisa kwincwadana yethu apha ukufumana iindaba zezithuthuthu zamva nje.